Inqubomgomo Yobumfihlo - LucidPix
Ikheli lewebhusayithi yethu yile: http://www.lucidpix.com.
ULucid wakhe uhlelo lokusebenza lweLucidPix njengohlelo lokusebenza lweFreemium. Le nsizakalo ihlinzekwa nguLucid mahhala, futhi ihloselwe ukusetshenziswa njengoba injalo.
Leli khasi lisetshenziselwa ukwazisa izivakashi maqondana nezinqubomgomo zethu ngokuqoqwa, ukusetshenziswa, nokudalulwa kwemininingwane yabantu uma umuntu ethatha isinqumo sokusebenzisa insiza yethu.
Uma ukhetha ukusebenzisa insizakalo yethu, uzobe uvumelana nokuqoqwa kanye nokusetshenziswa kolwazi maqondana nale nqubomgomo. Imininingwane yomuntu esiqoqayo isetshenziselwa ukuhlinzeka kanye nokwenza umsebenzi ngcono. Ngeke sisebenzise noma sabelane ngemininingwane yakho nanoma ngubani ngaphandle kokuthi kuchazwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Amagama asetshenziswe kule Nqubomgomo Yobumfihlo anezincazelo ezifanayo njengakwimigomo nemibandela yethu, etholakala kuLucidPix ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye inqubomgomo Yobumfihlo.
Ukuqoqwa kolwazi nokusetshenziswa
Lapho izivakashi zishiya amazwana kusayithi, lijoyina uhlu lwethu lwe-imeyili noma uhlu lokulinda, siqoqa imininingwane eboniswe emafomeleni angenisiwe, kanye nekheli le-IP lesivakashi nentambo yomenzeli wesiphequluli ukusiza ukutholwa kogaxekile.
Ngolwazi olungcono, ngenkathi usebenzisa Insizakalo yethu, singadinga ukuthi usinikeze imininingwane ethile ebonakalayo uqobo, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, igama lomsebenzisi, ikheli, indawo, izithombe, amazwana, nanoma yiluphi olunye ulwazi olunikezwe ngumsebenzisi. Imininingwane esiyicelayo izogcinwa yithi futhi isetshenziswe njengoba kuchaziwe kule nqubomgomo yobumfihlo.
Uhlelo lokusebenza newebhusayithi zisebenzisa izinsiza zangaphandle ezingase ziqoqe imininingwane esetshenziselwa ukukubona kanye / noma ukuthuthukisa izinsizakalo zethu.
Izixhumanisi zenqubomgomo yobumfihlo yabahlinzeki bensiza besithathu esetshenziswa uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi:
Amasevisi we-Google Play
I-Google Yenza ngcono
Sifuna ukukwazisa ukuthi noma nini lapho usebenzisa Insizakalo yethu, uma kwenzeka kube nephutha kuhlelo lokusebenza siqoqa idatha nolwazi (ngemikhiqizo yenkampani yangaphandle) ocingweni lwakho olubizwa ngeLog Idatha. Le Datha Yokungena ingafaka imininingwane efana nekheli lakho le-Inthanethi Internet Protocol (“IP”), igama ledivaysi, inguqulo yokusebenza kohlelo, ukumiswa kohlelo lokusebenza lapho usebenzisa insizakalo yethu, isikhathi nosuku lokusebenzisa kwakho lesevisi, nezinye izibalo .
Amakhukhi angamafayela anenani elincane ledatha ajwayele ukusetshenziswa njengezikhombi ezihlukile ezingaziwa. Lokhu kuthunyelwa kwisiphequluli sakho kusuka kumawebhusayithi owavakashelayo futhi agcinwe kwimemori yangaphakathi yedivayisi yakho.
Le Service kanye ne-App futhi bangasebenzisa ikhodi yenkampani yangaphandle nemitapo yolwazi esebenzisa “amakhukhi” ukuqoqa imininingwane nokwenza ngcono izinsizakalo zabo. Unenketho yokwamukela noma ukwenqaba la makhukhi futhi wazi ukuthi ikhukhi yathunyelwa nini kudivayisi yakho. Uma ukhetha ukwenqaba amakhukhi ethu, ngeke ukwazi ukusebenzisa ezinye izingxenye zale Nsizakalo.
Singase siqashe izinkampani zangaphandle nabantu abathile ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Ukwenza lula inkonzo yethu;
Ukuhlinzeka uMsebenzi egameni lethu;
Ukwenza imisebenzi ehlobene nensizakalo; noma
Ukusisiza ekuhlaziyweni ukuthi kusetshenziswa kanjani uMsebenzi wethu.
Sifuna ukwazisa abasebenzisi balensizakalo ukuthi laba bantu besithathu bayakwazi ukuthola imininingwane yakho. Isizathu ukwenza imisebenzi abayabelwe bona basenzele yona. Kodwa-ke, banesibopho sokungadaluli noma basebenzise imininingwane nganoma iyiphi enye injongo.
Siyakwazisa ukwethenjwa kwakho ngokusinikeza imininingwane yakho, yingakho silwela ukusebenzisa izindlela ezamukelekayo zokuhweba ukuvikela. Kepha khumbula ukuthi ayikho indlela yokudlulisa nge-inthanethi, noma indlela yokugcina nge-elekhtronikhi ene-100% iphephile futhi ithembekile, futhi ngeke sikwazi ukukuvikela ngokuphelele.
Izixhumanisi Ezenye Amasayithi
Le nsizakalo ingaqukatha izixhumanisi kwamanye amasayithi. Uma uchofoza kusixhumanisi esivela eceleni, uzoqondiswa kuleyo sayithi. Qaphela ukuthi lezi zingosi zangaphandle azisebenzi yithi. Ngakho-ke, sikucebisa ngokuqinile ukuthi ubuyekeze inqubomgomo yobumfihlo yalawa mawebhusayithi. Asinakulawula futhi asizibophezeli kokuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo, noma okwenziwa kunoma yiziphi izingosi noma izinkonzo zangaphandle.
Lezi Zinsizakalo azikhulumi namuntu ongaphansi kweminyaka eyi-13. Asazi siqoqe ngamabomu imininingwane ekhomba izingane ezingaphansi kweminyaka engu-13. Esimweni lapho sithola khona ukuthi ingane engaphansi kweminyaka engu-13 isinikeze imininingwane yomuntu, sikususa ngokushesha lokhu kumaseva ethu. Uma ungumzali noma umnakekeli futhi uyazi ukuthi ingane yakho isinikeze imininingwane yomuntu, sicela uxhumane nathi ukuze sikwazi ukuthatha izinyathelo ezidingekayo.
Ukuze ucubungule ukujula kwe-3D ezithombeni, kufanele silayishe isithombe sakho kuseva yethu ukuze kucutshungulwe isithombe esisekelwe kude ku-AI. Siqoqa futhi siqophe imininingwane elandelayo:
Isithombe osicelile sisebenza nge-App yethu.
Izikhombi zokusebenza ezihlukile, ezisivumela ukukhomba umsebenzisi kumadivayisi amaningi.
Izikhombi ezihlukile zokukhangisa.
Ikheli le-IP lapho ufinyelela kuzinhlelo zokusebenza. Futhi singakhomba indawo yakho ye-geo-ikheli lakho le-IP.
Imininingwane yedivayisi, kufaka phakathi uhlobo lwedivayisi, uhlobo lohlelo lokusebenza, umkhawulo wesikhathi nezilimi zakho ezikhethwayo.
Imininingwane yokusebenzisa, efana nesikhathi nosuku ungene ngalo kuzinhlelo zokusebenza, izici owasebenzisile, izintandokazi zakho nokuthi usebenzisa isikhathi esingakanani i-App njalo lapho uyivula.
Singavuselela inqubomgomo yethu yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke, uyalulekwa ukuthi ubukeze leli khasi ngezikhathi ezithile nganoma yiziphi izinguquko. Sizokwazisa nganoma yiluphi ushintsho ngokuthumela inqubomgomo entsha Yobumfihlo kuleli khasi. Lezi zinguquko zisebenza ngokushesha ngemuva kokuthi zifakwe kuleli khasi.
Uma unemibuzo noma iziphakamiso mayelana nenqubomgomo yethu Yobumfihlo, unganqikazi ukuxhumana nathi nganoma info@LucidPix.com.